के हो अप्टिकल फाइबर ? किन अरूभन्दा छिटो हुन्छ फाइबर इन्टरनेट ? – Nepal Press
के हो अप्टिकल फाइबर ? किन अरूभन्दा छिटो हुन्छ फाइबर इन्टरनेट ?
२०७७ मंसिर २८ गते १२:५९
पछिल्लो समय फाइबर इन्टरनेट एकदमै लोकप्रिय छ। केही वर्ष अगाडिसम्म सीमित ब्रान्डब्यान्ड कनेक्सन मात्र फाइबर उत्कृष्ट थिए । अर्थात् वायरलेस, वाइम्याक्सको प्रयोग गरिन्थ्यो वा सामान्य इन्टरनेट केबल (तार) को माध्यमबाट प्रयोगकर्तासम्म इन्टरनेट पुर्‍याइन्थ्यो ।
तर, अहिले फाइबर इन्टरनेटको माग बढ्दै गइरहेको छ । यसको कारण हो इन्टरनेट स्पिड। अन्य माध्यमभन्दा फाइबर इन्टरनेटबाट धेरै स्पिडको इन्टरनेट हासिल गर्न सकिन्छ वा यसमा धेरै द्रुत गतिमा डाटा ट्रान्सफर हुन्छ ।
भलै एक सामान्य प्रयोगकर्ताका लागि फाइबर इन्टरनेट नयाँ हो । तर, इन्टरनेटको दुनियाँमा फाइबर धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै प्रयोग हुँदै आइरहेको छ । सन् १९५० मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न फाइबर केबलका लागि तयार गरिएको थियो ।
बिरामीको शरीरमा शल्यक्रिया नगरी फाइबर केबलको माध्यमबाट डाक्टरले शरीरभित्र हेर्नका लागि यसको प्रयोग हुने गरेको थियो।
कुनै बेला बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने यो फाइबर केबलको अर्को पक्ष हेर्ने हो भने, विश्वमा अहिले जुन इन्टरनेटको जालो बनेको छ, त्यो जालो यही फाइबर केबलबिना सम्भव थिएन ।
अहिले फाइबर केलब विश्वभर एउटा माकुराको जालो जसरी फिँजिएको छ। र, यसैको माध्यमबाट तपाईं र हामीले इन्टरनेटको उपयोग गर्न पाइरहेका छौं।
के तपाईलाई थाहा छ,अप्टिकल फाइबर टेक्नोलोजीले कसरी काम गर्छ ?
अब हामी तपाईलाई अप्टिकल फाइबरले कसरी काम गर्छ भन्ने जानकारी दिनेछौं । तर, त्यो भन्दा अगाडि अप्टिकल फाइबर भनेको के हो ? त्यसबारे बुझौं ।
फाइबर अप्टिक्सलाई हामी ट्रान्समिसनको माध्यमको रूपमा बुझ्न सक्छौं । वा यसलाई एकदमै द्रुत गतिमा प्रकाशको सहायता लिएर डाटा कुद्ने पाइपको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। फाइबर केबल कपाल जस्तै पातलो र लामो हुन्छ। बीचमा नचुटियोस् भनेर एकै स्थानमा धेरै वटा फाइबर अप्टिक्सलाई बाहिरी पत्रले बेरेर सुरक्षा दिइएको हुन्छ ।
र, बन्डेलमा राखिएको यस्तो तारलाई अप्टिकल केबल भनिन्छ। लामो दूरिसम्म पनि प्रकाशको सहायता लिएर एकदमै छिटो डाटा पुर्‍याउनु फाइबर अप्टिक्सको प्रमुख विशेषता हो ।
प्रकाशको गति एकदमै छिटो हुने भएकाले यसलाई डाटा ट्रान्समिसनको माध्यम बनाइएको हुन्छ । फाइबर अप्टिक्सलाई ध्यान दिएर हेर्ने हो भने कपालभन्दा सानो पाइप भित्र प्वाल देख्न सकिन्छ ।
यदि हामीले फाइबर अप्टिक्सको एक छेउबाट लेजर प्रकाश लगाउने हो भने अर्को छेउमा देख्न सकिनेछ । जब अप्टिकल फाइबरमा समस्या आउँछ, तब बीचमा टुटेको र चुटिएको छ कि छैन ? भन्ने पत्ता लगाउन यही तरिकाको प्रयोग गरिन्छ ।
एक फाइबर केबलभित्र धेरै फाइबर स्टान्ड्स हुन्छन् । यहाँसम्म कि समुद्र भित्रबाट केबल ल्याइएको वा लगिएको छ भने त्यसमा हजारौं साना साना फाइबर राखिएको हुन्छ । यसलाई कोर पनि भनिन्छ । यसको अर्थ केबलमा १० फाइबर राखिएको छ भने १० कोर भन्न सकिन्छ । यसलाई नजिकबाट हेर्नेहो भने सीसा पनि देख्न सकिन्छ । त्यसका साथै कोर, क्लडिङ वा बफर कोटिङ हुन्छन् । यसको अर्थ फाइबर भित्र पनि पातलो सीसा हुन्छ, जहाँ प्रकाश कुद्छ ।
फाइबर अप्टिक्सले कसरी काम गर्छ ?
तपाई यसलाई पाइपको रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ । जसमा प्रकाशको माध्यमबाट डाटा ट्रान्समिट हुन्छ। फाइबर अप्टिक्सको भित्तालाई प्रकाश ठोक्किएर धेरै टाढासम्म पुग्ने र यता – उता फैलिन नसक्ने गरी डिजाइन गरिएको हुन्छ ।
तर, तार कतै मोडियो भने प्रकाश जान पाउँदैन । र, इन्टरनेट बन्द हुन्छ । तर, यस्तै अवरोह रोक्नका लागि भित्र क्लडिङ गरिएको हुन्छ। जसको सहयोगले प्रकाश निरन्तर बाउन्स गर्छ ।
क्लडिङलाई ‘ऐना देखिने भित्तो’ पनि भन्न सकिन्छ । क्लडिङले प्रकाश सोस्दैन र अगाडि बढ्छ । यसैकारण प्रकाश कयौं किलोमिटरसम्म यात्रा गर्न सक्छ ।
फाइबर अप्टिक्स किन छिटो र सुरक्षित छ ?
हामीले यसअघि नै थाहा पाइसक्यौं कि, यहाँ प्रकाशको माध्यमबाट डाटा ट्रान्समिसन हुन्छ । हामीलाई थाहा छ, भ्याक्युममा प्रकाशले ३ लाख किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा यात्रा गर्न सक्छ । यसबाट हामी सजिलै अन्दाज लगाउन सक्छौं कि इन्टरनेटको गति कति छिटो हुन सक्छ भनेर ।
प्रकाशभन्दा छिटो अहिले संसारमै केही छैन र फाइबर अप्टिक्समा यसैको प्रयोग गरिन्छ । पुरानो इन्टरनेट केबलको कुरा गर्दा त्यसमा इलेक्ट्रिकल सिग्नलको माध्यमबाट डाटा ट्रान्समिसन हुन्छ । जुन, प्रकाशको तुलनामा एकदमै ढिलो हुन्छ ।
कपर वा स्याटेलाइटको तुलनामा पनि फाइबर अप्टिक केबलले छिटो डाटा ट्रान्समिट गर्छ । फाइबर अप्टिक्सलाई डेटा सेक्युरिटीका लागि पनि उचित मानिन्छ । किनभने, फाइबर अप्टिक केबल ह्याक गर्न स्याटेलाइट वा कपर वायरको तुलनामा मुश्किल र महंगो पनि छ।
प्रकाशित: २०७७ मंसिर २८ गते १२:५९